AJJEEFNEERRA JEDHANII RASAASA NATTI ROOBSANII DEEMAN-KAN NARUKUTES KORA BITTINESSAA-WALLAGGI DHUME!! – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosAJJEEFNEERRA JEDHANII RASAASA NATTI ROOBSANII DEEMAN-KAN NARUKUTES KORA BITTINESSAA-WALLAGGI DHUME!!
#Duguuggaa Sanyii Wallaggaa!
Manasaa keessaatti, maatiisa gidduutti Rasaasa Itti roobsanii du’eera jedhanii biraa deeman. Hojjetaa Baankii Dashin ture. Loltoonni Abiy AHmed Ali Harka irraa ciran. Lubbuun hafeetu miidiyaatti dhiyaateera. Waan inniif maatiinsa jedhan dhaggeeffadhaa. Waan Wallaggi guutummaan keessa jirus hordofaa!!
Monenus Hundara tu Boxoboxe
Akkam jirtu? Guyyaa sadiif hojiidhaaf bakka Waaqayyo jiru, bakka Mootummaan hin jirren, ture. Akkuma Aab Odaa Gurree, Facebook’n kun ana malee waan isinitti miyooftu miti. Jawweenis “Ani bar soogidda tahe” jedhee tureem. Gunduunfaa taateewwan guyyoota sadan darban kanaa:
1. Jawar Mohammed Pirezidaantii Oromiyaa irraa kaafamuudhaan Obbo Shimallis Abdiisaa guutummaatti Pirezidaantii Oromiyaa tahee muudameera. Baga gammadde naa jedhaa warri Obbo Shimallisitti dhiyoo jirtan. Kanaa booda, Shimallis Pirezidaantii hunduma keenyaa taha jedheen abdadha.
2. Kuma Bekele, taphataan OPDO/ODP duraanii sababa bara darbe Leenjisaa isaa wajjin wal loleef #bench fi #over_bench irra erga turee, booda kanammoo daawwataa ta’e; torban kana keessa leenjisaa isaa wajjin araaramee dhiifama gaafachuudhaan gara taphataa dhaabbataa Paartii Badhaadhinaatti deebi’eera. Kumaan akka durii kubbaa dirree gidduu deddeebisuu dhiisee goolii galchuu akka qabu ykn gooliif kubbaa mijeessee kennuu akka qabu waliigaltee irratti ibsameera. Kumaa, baga gara kilaba kee duraatti itti gaafatamummaa guddaadhaan deebiten siin jedha.
3. Jaal Dr Milkeessaa Miidhagaa ilma lammataa argate; anatti bahaa jira jechuudha. Ilma Abbaa caalu tahee nuuf haa guddatu ilmi keen jedha. Jawween ilma isaa Oromoo Jawaar jedhe. Egaa, Aab Jawaar fi Aab Milkeessaan Oromoo fi Oromiyaa kan dhuunfaa isaanii taasifachuuf hawwii qaban ibsataa jiru. Obboleessi koo Bekana Wakweya bara darbe mucaa durbaa dhalchee maqaashee Oromiyaa jedhe. Oromiyaan saala lamaan ibsamti jechuudhaa? Oromiyaa Dhiiraa moo Oromiyaa Dhalaa nuuf wayyaa? Zooroo zooroo, ani Abbaa Gadaati. Oromoonis, Oromiyaanis Abbaa Gadaa dhaan bulti. Oromoo fi Oromiyaa, Gadaatu bulcha jechuudha!
4. Caffeen Gamtaa ABO, KFO fi PBO walgahii hatattamaa guyyaa sadiif balbala cufatee Adaamaatti gaggeessaa jira. Walgahiin isaanii guyyoota 17 ol turee jijjiirama ol ol fagoo (high high reform) taasisuu qabun jedha. Caffeen Gamtaa murtoowwan Caffeen OPDO dabarsee fi kallattii kaa’e gamaaggama taasisuutti yeroo isaa guba taanaan gara jijjiirama gadi fagootti (deep reform) deebi’aa jira jechuumaafi.
5. Walgahii hatattamaa Gaaddisni Hooggansa Maatii keenyaa bakka ani hin jirretti walgahii taa’een, Jaal Gadaa Moonenus “Akkamitti otoo abbaa fi hangafni koo jiruu ani GHM hoogganaa?” jechuudhaan fedhaan Baallii Aab Moonenus Hundarraatti dabarseera. #Aabee_Iddooshee Maammoo mormii qabdu ibsattus Jaal Sanyiin (the king maker) kun ajandaa diinaati jechuun yaadicha harkatti kuffiiseera. Bara hooggansa Ba’aa’inaa hawwinaaf!
6. Jaal Dereje Begi, Aab Taayyee Danda’aa fi Pirezidaantii keenya Obbo Shimallis Abdiisaa dhiifama hin gaafatu taanaan hanga Fulbaana bara 2013tti mana hidhaa akka turuu danda’u gurra na buteera (oduu dhagaheera)! Abshaalli dhiifama gaafatee mana hidhaatii gootummaan bahee qabsootti deebi’a. Darajjeen quufaa fi garraamii dha. “Dhiifama gaafachuu irra mana hidhaatti tortoree du’uu naaf wayya” waan jedhu fakkaata! Bara kana Pragmatist tahuutu nama baasa! Dareekoo Pragmatist tahi naa jedhaa warri boor deemtanii isa dubbistan! Ani hanga inni murtoo argatuutti deemee isa hin dubbisu!
Nama suuraasaa kanaa gaditti argitan kana warri #Bilxiginnaa hojiirraa geggeessaniiru.
1. Godatti dhalate laataa?
2. Badiinsaa maali?
3. Seenaa akkamii qaba?
4. Maal hojjetaa ture?
Karuma beektan sana qindeessaati Taajjabbii biraan gahaa!!!